I-Honduras: Emuva kwintlekele, imfazwe yombutho iphinda ikhethe - i-Geofumadas
I-Honduras: Emuva kwiinkathazo, imfazwe yombutho iphinda ikhetho
Matshi, 2011 Izopolitiko kunye nentando yeninzi
Sekunjalo iintsuku ezininzi engazange abhale kwesi sihloko, kodwa iziganeko ezenzeka ngeveki eledlule kunye nokubonisana kwabahlobo abalungileyo abakhangela kule festile bandixelele ukuba ukuba ndinento into yokuthetha emva kokuba amajelo ngamazwe akhiphe ukuvuza okutsha.
Ngoko ndiyisebenzisa ngokufanelekileyo "iCafé de Colinas" esondayo ukusuka eluhambo lwam lokugqibela ukuphazamisa umxholo othile AutoCAD 2012 Ndixhalabile, nje kuphela ukuba andiyikubona oko uBentley enenjongo yokuthula ngokungaqhelekanga kwaye ngokuqinisekileyo uya kugqiba umsi omkhulu kwi-2011 apho ndingenayo nayiphi na ingcinga kwifomathi ecacileyo.
Imfazwe ebandayo, incinane kakhulu ishintshile kwiminyaka eyi-40.
Ndafika Honduras ngenxa imfazwe yamakhaya, wazithwala 12 iminyaka yaye zibiza ukufa ngaphezu 75,000, kuquka elinesibini isibini izalamane wam osenyongweni. Ndakhe ndaya zirhuqwe iminyaka emashumi mathathu, yaye yintoni ndikhe ndabona kwi ngumqolo ezimbini zokugqibela iinkumbulo into nayo xa osanda ukufunda imijikelo yam yokuqala kwisikolo kum. Ezo amaxesha xa-orenji weva irabha kamnandi anuka xa umatshini bolsón Singer eyenziwa ngumama wam, negama lam libhalwe bulityalwe phantsi efanayo yasetyenziswa ukuze ziphawule umhla ukuba amaqanda kuvulwa imithwalo chompipe- cross-green umsele ingubo ngasemva, esotha ilungelo uqhagamshelane kunye ngesonka sombona sifudumele kwakhona anyuswe scapula comal.
IMfazwe kula iimeko ifana kakhulu, ayiyi ukuqamba iimpawu zophuhliso nantoni, kunye uhlobo ngoku endaweni bala abomvu iindonga wazimisa unomathotholo efihlakeleyo nasezindulini lihlathi, kuba iifoto abasasazekileyo zifakwe kwiintanethi zentlalo kwaye zichanele ngokucacileyo iziteshi zomsakazo nakuma-TV. Right gqolo ukugcina uncamathiselo ngokomdla wabo kunye norhulumente uxhomekeke palliatives ukuba musa ahlawule kwi yotshintsho karhulumente, ukwehla yemibutho yezopolitiko kunye neengxaki zembali ngokuhlasela ngempefumlelo evela izimvo ezakhayo imboni.
Iyaqhubeka ibe yinto ebini, apho kukho ukugqithisa okumbini kuphela: enye embi kunye nobi. Amacandelo okukhohlisa nokugqwetha agcinwa, ngexesha apho abantu (abaninzi) banokufikelela kumajelo ngokulula, kwaye apho kungaboniswa ukuba ubuxoki bekunene bume njengalekho ngakwesobunxele; okwenzekayo kukuba ukuthengiswa kwamaphephandaba ngoku kukwazi ukusebenza kumgangatho ophezulu abantu, abaholwa ngabadlali abaqondayo ukunyuka kwento yokuthenga ingqalelo kwinqanaba elibuthathaka kwintsapho nganye, iqela okanye iklasi yentlalontle; kungakhathaliseki ukuba yiyiphi inkohliso ongayisebenzisa.
iimeko linikisa iminyaka engamashumi thile ezahlukeneyo, kodwa ke nangoku xa kuthelekiswa: ngelo xesha, evela entshona Yurophu angaba naliphi na inani izixhobo. Abo ezibane ngokuhlwa wehla entabeni ukusuka kumda Honduran, ngobunye ubusuku Bendisazi ukuba namarhamncwa abazono ziziimfumba izixhobo ifihle ingca amadlelo. Xa kuziswa ukuba zikhanyise imipu umatshini Russian, kwakungasekho yimfuneko njengoko afohlela wokuzingela, ngezinkempe ezayenza nezixhobo zokulima lowo wambamba abalimi Ngenxa yoko zanyibilika ukuvelisa iimpompo cacera. Iminyaka emithathu yayaneleyo yonke into esenyakatho ye-El Salvador yokwakha nokugcina indawo yeentaba iminyaka elishumi elinesibini phantsi kweemeko "ezifunyenweyo".
Namhlanje, azikho izixhobo ezininzi phantsi kwesitampu se-Left, i-Cuba ayikwazi ukubetha kwiimeko ezinjalo kwaye iVenezuela ineemingalo yokwenza njalo ngaphandle kokubonakalisa intlupheko yengcinga yenkokheli yayo. Kodwa ukuthengiswa kweziyobisi kunye nolwaphulo-mthetho olulungelelanayo lunakho izixhobo eziphezulu kunokuba umkhosi unako ukwenza imihla ngemihla ngokunciphisa igalelo layo elincinci kwaye lihlazise izenzo zabo. Isizathu sokuba ndikhankanywe elide elidlulileyo indima lolwaphulo-mthetho oluqulunqiweyo kunye ukuthutyeleziswa kweziyobisi zizinto sokuphela ukuba imfazwe yamakhaya, abaya kuyenza xa kukho inkuthazo ukuze iimfuno zabo ezizodwa zexeshana: amandla nemali. nayo eyahlukileyo kakhulu indima enokubakho eUnited States, apho ngelo xesha olunokubeka kunye ukuphikiswa-revolution ekukhanyeni emini, aninako ukwenza kwi ngamazwe zombini kwezopolitiko ethe kwezoqoqosho namhlanje, le mpendulo ukuhla izakhono womkhosi phambi imfazwe ngokulinganayo, kwilizwe apho mphandle lubalaseleyo lufana iindawo apho luqalile iphumelele imfazwe e-El Salvador, emva kokunyanzeliswa yokuzimela iqhele emva lohlaselo umnxeba ekupheleni 1981.
Kwakhona kufana nesicwangciso sokuthenga ingqalelo, akufani neze nompembelelo wangaphandle kunye nendima edlalwa yinkalo yokucinga. Kwiminyaka yam, abacebisi baseCuban bafika ngokukhawuleza; Inzondo engeyomfuneko yayihlwayelwe kwiibambisene ezilungileyo (uluntu); yachaphazeleka abantu ilifa labo bakha ngenxa yemizamo yabo, abantu babona ezimbi iimazi ubawo bambulala ephethe umpu, wamnqumla esidlangalaleni sisananelo somphefumlo, izityalo zabo zathinjwa nje umyalelo we-revolution. Ezi zenzo emizaneni, apho wonke umntu uyazi ukuba awunayo elibi, ngaphezu kuchaphazela ilifa kwakhiwa kwiminyaka emininzi, wenza abantu abathobekileyo balahlekelwa ilungelo bakuba ziyonwabele iminyaka emininzi, usondeze ubisi, yintloya, ingqolowa kunye namayeza simahla. Ezi zinto nezinye izinto ezimbi kakhulu kubangele ukuba abantu belahlekile, kwimiqathango yokuba loo mizi ibalwe kwimephu yemaphu kuphela kwiinjongo zembali, abantu abazange babuye.
Ngelo xesha abacebisi baseCuban bafika, kwaye baxelelwa ukuba baphosakele ukukhupha indiza kunye nokukhanyela abantu abangathathi hlangothi, bekude kakhulu.
Yindlela eqhelekileyo kwiidolophu ezingakhange zilungele ukuhlela, ukuhlwayela imisebenzi yenzondo, kodwa ayizinzileyo. Ingxaki kufuneka ihlaselwe, kungekhona abantu. Ukungalingani, ulwaphulo, ukungabi nxaxheba kwezakhiwo zentatho-nxaxheba, ziingxaki ezivezwayo, kodwa ukufezekiswa kwazo kufuneka zisebenze kunye nezicwangciso ezingaxhomekeke kwinzondo, kuba kungekhona wonke umntu onesithuthi, indlu, ifama okanye inkampani inonakele okanye oligarchs
Imfazwe ebandayo ifana kakhulu nomntu ongenakho ubuchule, kokubili ngakwesokunene sakhe nangakwesokudla.
Imfazwe yombutho iyayikuphepheka.
Iminyaka ecaleni ye-10 ixabisa i-Salvadoran ekhohlo, ukudibanisa iinzame kwaye yenze i-front eyodwa emele iminqweno. I-Farabundo Martí yakhiwe ngamanxeba, ukungcatsha, iimpazamo zabantwana kunye nenkxaso yamazwe ngamazwe. Kwimeko Honduras, kwiminyaka nje emibini kwanela olandelayo waba mdibi iqhinga ukuya yokumanya imikhosi leftist yangoku Encause, impembelelo ngamazwe kude kude kwinqanaba yembono kunye namalungiselelo izinto ezininzi zijonga angeyomfuneko .
Isicwangciso sawo sinokusebenza, ngokusekelwe kwimfuno yangempela yabantu abangahlali banelisekile ngemveli yeklasi yezopolitiko kunye nokusebenzisana kwayo namandla oqoqosho, ukuya kumanqanaba enqatshelwe ukuba kungakhathaliseki ukuba isicwangciso esilungileyo singaba njani, asikwazi ukukholelwa ukuba akenzanga emva komdlalo ombi. Xa ezi nqanaba zokulahlekelwa kwidumo kunye nokungafihlisi zifikeleleke, indlela eya kwimpikiswano iyahlanjululwa. Nangona i-Resistance isaqhubeka ilahlekile, ekuhlanjululeni ubunkokheli bayo, yenza iimpazamo kwaye ixhatshazwe ukunyanzelisa ukuba izikhokelo zayo zenzeke ngakumbi kunokuba ziqhelane nezicwangciso.
Kodwa ekugqibeleni, iya kuba nokuzinza. Nangona abawuthobeli ivoti abantu ngaphambi kwexesha kunye nesakhiwo iingcinga azalwe kwimeko lwasekuhlaleni, nto leyo akubonakali Ulangazelela kwamanye amaxesha (ukuba awusele) kunye namanye amazwe (apho kungekho azisekho). Oku kusekelwe ekwakhiweni kobunkokeli obutsha, ngokuhlanganiswa kwentlalo kunye negalelo lomsebenzi (olukhoyo) kwiingxaki ezisetyenziswayo ukulungisa isigxina. Ukulibala iingcamango ezingezizo zokusebenza, ezifana nokusebenzisa inzondelelo yokuzondayo, ubuxoki benkwenkwezi kunye nokunyaniseka okungafunekiyo ukuba kuqinisekiswe ukuba ungumlingani wakho omhle (uluntu)
Ukwenza njalo, i-6 ingathatha iminyaka yokubandezeleka kwintlambo. Kodwa ngelo xesha, kungenzeka ukuba uphumelele iingongoma zecandelo likarhulumente, umkhosi kunye noluntu; ngaphandle kwesidingo sokuya kwinqanaba likaMongameli. Ngoko, ukukhuthaza umgaqo omtsha okanye uholele umviwa we-President unokuphumelela imfazwe.
Okwangoku, ukufezekisa loo mzekelo, thintela okanye ungaphikisani nayo ... Imfazwe yombutho yinto yokukhetha.
Akunjalo konke konke Ndiyakuthanda ukukhumbula ngaloo mini ukuba kwiphephandaba Honduran wabona imizimba ziyimfumba eye phezu kwabantu 30 kwindlela ezingqondweni zam remembraba ndikutsalile ngetshokhwe uze wenze amaqamza wamtshicela elingenatyala ngomlomo efanayo ibe samente. ngaphantsi kakhulu ukuba kuza iminyaka elishumi kamva, uze ubone imithi iisentimitha ezimashumi mathathu ububanzi eyadini apho ndafunda ukudanisa spin, enchute kunye cashews kwaye izakuxhumela khona esibondeni, ngoxa kwelinye icala nabazala bam bacula kwevili umdlalo I soyika ... UDona Ana akakho apha, useVergel yakhe...
Kodwa xa ityala lezentlalo kunye nokuphathwa kakubi kulawulo lukaRhulumente luvutha umpheki wokhuseleko, imfazwe yoluntu ingaba bubungendawo obuyimfuneko. Iimbambano zivelisa kuwo onke amanqanaba obomi bentsapho, ezopolitiko, ezoqoqosho, ukungafani kwemilinganiselo kunye nokuqinisa izivumelwano. Imfazwe ayikho, kodwa kubonakala ngathi iHonduras, ixesha lifikile. Kuba zininzi iinzame ezenziwayo, makeup zexesha elifutshane aziyi ukutshintsha isiphumo ukuba (kuba ngoku) ayikwazi ukunceda abo kwicala cala, kungekhona ngenxa yokuba singenayo imiqathango ecacileyo, kodwa ke ngenxa yokuba ukhetha ukuze sinandiphe ezo zinto ukwanelisa yethu uhlala rhoqo rhoqo kusasa nakwabo basebenzela usuku lonke kunye nelo busuku. Xa iingxabano ezingeyomfuneko siye salahlekelwa amaxesha elungileyo, ngoko azinikele iinzame ngokusekelwe ingqeqesho yethu, sonwabe noko yimpumelelo ngaphandle iphupha imiboniso ezimnandi, ukuba imini enye isichukumisa ukuthatha isixhobo, siya, ukuba ebuhlanti, ngcono kakhulu, bobabini bahlala.
Kwakhona inxalenye kakuhle cala bakholelwa ukuba iinkokheli ezintsha, ukuze aqhubeke iingcamango kakhulu ukuba kukho-ekhohlo okanye ekunene lakhe kuphunyezwa ngengqondo evulekileyo, ngokusekelwe kakhulu kwizinto ezingcono ezinokuthi zisetyenziswe ngendlela zibe inxaxheba ngaphandle kwemfuneko yemfazwe, ehlala kumxholo; Into ehlekayo kukuba mhlawumbi ukufikelela ekupheleni ukuba imfazwe emihle ihlala.
Sithemba, into esilindele ukuba kukuba sichitha iminyaka elandelayo ye-7 kule ndawo, kwaye ekugqibeleni ubukhokheli bobabini bobukhosi benza izivumelwano ezishiya izinto ezifanayo ... okanye ezimbi.
PD. Nangona i-melancholy ye post kwaye ingenangqondo elula yokuthetha kwam, ndilungile. Ndiyabulela ngokuthanda kwakho okuhle.
Post edlulileyo«Edlulileyo Companion abayili kaThixo, zincedisa enkulu Civil 3D
Post Next Umagazini wePC, undihambisa kwi-digital versionOkulandelayo "
I-4 Iimpendulo "kwiHonduras: Emuva kwintlekele, imfazwe yombutho iphinda ikhethe"
ayisayi kulwa nempi ye-portemonos kakuhle i-pazz
Enkosi ngamazwi akho, kwaye enkosi nangenkxaso yakho kwi-egeomate. Oku kubonisa ukuba sikude ekubeni sisithethi esithetha iSpanish esinemibono eqhelekileyo.
UDon G othandekayo, ndiziva ndihlazekile. Asikho kwii-antipodes zeendawo kwaye kunjalo, apha ingxaki oyikhankanyileyo ayifakwanga. Ndiyazibuza ukuba ngaba sihlala sijonge kwiimvalo zethu?
Apha sisexesha lokunyulwa, kuba u-Aprili 10 ukonyula umongameli omtsha. Kodwa andinakholwa ukuba inzima eLibiya, ukuyeka emsebenzini kaSocrates, ukufa kukaLiz Taylor kunye ... ukuba ukuxabana kwabazalwana bethu kubonakala ngakumbi. Ukuthetha okumbalwa nje kokuhambela kuka-Obama e-El Salvador. Ndibuhlungu ngokwenene.
Mhlobo othandekayo, isiLatin America ngokubonakalayo nje 'igama elidibeneyo' asinakuhlanganiswa ngokufanelekileyo. Iwaka licela uxolo kumhlobo.
Ndiyakuvuyela inqaku elihle kakhulu.
Ndiyathanda indlela yakhe yokucinga.